कोरोना संक्रमणको ‘हट स्पट’ बनेको वीरगन्जमा सामान्य ज्वरो, खोकी र दमका बिरामीले उपचार पाउन सकेका छैनन् । निजी अस्पताल चहार्दा–चहार्दै तीन दिनमा तीन जनाको मृत्यु भएपछि आक्रोशित बनेका वीरगन्जवासी आइतबार सडक प्रदर्शनमा उत्रिए । स्थानीयले वीरगन्जको नारायणी अस्पतालअगाडि निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन् ।
वीरगन्ज महानगरपालिकामा गत साउन १० देखि निषेधाज्ञा जारी छ । अस्पताल र चिकित्सकविरुद्ध नाराबाजी गर्नेमा शुक्रबार राति मृत्यु भएकी वीरगन्ज–२ छपकैया निवासी २० वर्षीया विष्णु लामाका परिवार पनि थिए । एक्कासि श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि शुक्रबार राति ११ देखि २ बजेसम्म सात वटा अस्पताल चहार्दा–चहार्दै उनको मृत्यु भएको थियो । मृत्युपछि नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको स्वाब परीक्षणमा उनमा कोरोना पुष्टि भएको छ ।
‘विष्णुको जस्तो नियति अरू कसैको नहोस्, चिकित्सक र अस्पतालले आइन्दा लापरबाही नगरुन् भनेर सडकमा उत्रिएका हौं,’ प्रदर्शनमा उत्रिएकी विष्णुकी भाउजू अञ्जु तामाङले भनिन् । प्रदशर्नकारीले विष्णुलाई उपचार नगर्ने अस्पताललाई कारबाही र उनकी ४ वर्षीया छोरीको भरणपोषणको व्यवस्था हुनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् । प्रदर्शनकारीले अस्पताल परिसरमा रहेको कोरोना बुथ र नारायणी अस्थायी कोरोना (गण्डक) अस्पतालका इन्चार्ज डा. उदयनारायण सिंहको ना१२च ५९५५ नम्बरको गाडीको सिसा फुटाइदिएका थिए । प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच केहीबेर दोहोरो ढुंगामुढा प्रहारसमेत भएको थियो । प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पार्न प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको थियो ।
थपिए ७५ संक्रमित
नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा आइतबार पर्सा प्रहरीमा कार्यरत ९ सहित ७५ जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ । वीरगन्ज महानगरको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख अरुणकुमार महतोमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ । संक्रमितमध्ये ३ जना बारा र १ जना सर्लाहीका छन् ।
वीरगन्जस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासका एक कर्मचारीमा पनि संक्रमण पाइएको छ । नारायणी अस्पतालमा कार्यरत ३ र वारुणयन्त्रका २ कर्मचारीसमेत संक्रमित भएका छन् । डा. उपाध्यायका अनुसार संक्रमितमध्ये १५ जना महिला छन् । ८ जनामा ज्वरो र खोकीको लक्षण देखिएको छ । २९ जनामा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका क्रममा कोरोना पोजिटिभ पाइएको उनले बताए । सशुल्क परीक्षण गराएका ११ जनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको हो । कान्तिपुर दैनिकमा भूषण यादवले खबर लेखेका छन् ।
कसले पाउँछन् निःशुल्क उपचार ?
दशैंका लागि २५ सय मेट्रिक टन चिनी